Guddoomiyaha Golaha shacabka oo ka hadlay walaaca laga qabo in doorashadu dhib u dhacdo | Dusta News
Home > General > Guddoomiyaha Golaha shacabka oo ka hadlay walaaca laga qabo in doorashadu dhib u dhacdo
May 30, 2020 May 30, 2020 Dusta News582Leave a Comment on Guddoomiyaha Golaha shacabka oo ka hadlay walaaca laga qabo in doorashadu dhib u dhacdo
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh ayaa ka hadlay walaac laga qabo in dib u dhigista furitaanka kalfadhiga Baarlamaanka ay horseeddo dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya ee sanadka 2021-da.
Saameynta ka dhalatay cudurka Covid-19 oo Soomaaliya gaaray ayaa sababtay in la hakiyo howshii Baarlamaanka, taasoo udub dhexaad u ahayd hannaanka doorashada xigta ee dalka,waxaana dib u dhac ku yimid xilliga uu furmayo Kal fadhiga 7 aad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Hase yeeshee, guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo lahadlay BBC ayaa ku adkeystay in xal loo heli doono sidii doorashada xilligeeda loo qaban lahaa.
“Waxaan rabaa in hal qodob si fiican loo fahmo. Sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay baarlamaanka, oo kala ah Golaha Shacabka iyo Golaha Aqalka Sare. Muddooyinkii ugu dambeeyay ee aan kasoo gudubnay oo ay ugu dambeysay 2016-kii, doorashada la aadi jiray waxay ahayd doorasho dadban, marka waxa la dooranayo waa 275 xildhibaan oo Golaha Shacabka ah iyo 54 oo Aqalka Sare ah, sidaas awgeed waxay ila tahay intaas xal loo waayi maayo” ayuu BBC u sheegay maanta oo sabti ah.
Wuxuu Mursal meesha ka saaray suurtagalnimada in la kordhin doono muddo xileedka Baarlamaanka iyo madaxweynaha ay leeyihiin waqti loo cayimay sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa jira walaac ay qabaan siyaasiyiinta oo salka ku haaya in Madaxda Dowladda Faderaalka Soomaaliya marka lagaaro horaanta sanadka soo socda ee 2021-da ay sameeyaan Mudo kororsi inkastoo wasiirka 1 aad ee Xukumada Soomaaliya uu shirka Golaha wasiirada ka sheegay in ay u diyaar garoobayaan doorasho dalka ka dhacda.
Warar ay heshay Mustaqbal ayaa Muujinaya in Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre aysan isku aragti ahayn arimaha Doorashada Soomaaliya ee Sanadka soo aadan, laga yaabo in Maalmaha soo socda ay ku dhawaaqaan xisbiyo siyaasadeed oo kala duwan.
Doorashadii u dambay ee Soomaaliya ka dhacday dabayaaqadii 2016 iyo horaantii 2017 ayaa waxaa ka qayb qaatay 275 xildhibaan oo Golaha Shacabka ah iyo 54 oo Aqalka Sare ah, waxaana guulo yar sanadkaasi laga gaaray in la kordhiyo xubnaha ka qayb qaadanaya codaynta inkastoon sanadkaan wali la shaacin qaabka ay u dhacayso doorashada Soomaaliya.
Xaaladaha ka soo kordhay maanta kiisaska cudurka COVID-19 ee Somalia
Qaybtii labaad dad laga keenay Sacuudiga oo Galabta laga soo dajiyay Garoonka Diyaaradaha ee Muqdisho
Masar oo faahfaahin Deg Deg Ah Ka Dalbatay Dowladda Itoobiya
Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay xeerka matalaada gobolka Banaadir ee aqalka sare